I-Amazon Prime Day vs Black Friday: uzothenga nini?
I-Amazon Prime Day isiseduze, kepha ukuthengiswa okukhulu konyaka kusabhukhelwe uNovemba. Ukuthi ulinde noma cha kufanele ulinde kuze kube uLwesihlanu Omnyama ukuthenga leyo TV noma ilaptop entsha kuzoncika esikhathini (ingabe uyayidinga igajethi yakho manje) nokuthi isikhathi ngasinye sokuthengisa siziphatha kanjani izinto ozifunayo.
Besilokhu sikulandela sobabili i-Amazon Prime Day ne- Black Friday iminyaka manje, ngakho-ke siyazi ukuthi izinto ezithile kungenzeka zishibhe kangakanani, kepha ake yazi ukuthi kulula kanjani noma kunzima kangakanani ukuthola nokubamba amadili amahle kakhulu kuwo wonke umcimbi.
Yingakho sikubonisa wonke umehluko phakathi kwe-Amazon Prime Day neBlack Friday, nokuthi ngabe kufanele ulinde kuze kube nguNovemba ngalokhu kuthenga okukhulu kangaka.
I-Amazon Prime Day vs Black Friday: Uyini umehluko?
Amazon Prime Day: umcimbi wokuthengisa wasehlobo ogxile kakhulue-Amazon lapho kulula khona bobabili ukuthola amadili nokuwathola ngaphambi kokuphela kwesitokwe
Black Friday: isikhathi sokuthengisa okukhulu ngoNovemba ngamadili amahle kakhulu agxile osukwini olulodwa . Amanani ngokuvamile aphansi, kepha njengoba kunabathengisi abaningi ababandakanyekayo nokuncintisana okuningi kwezinto ezihamba phambili, kungaba nzima ukuthola amadili owadingayo.
Yize kokubili ukuthengisa kuthanda ukuba kumadivayisi afanayo nakumagajethi, kunokwehluka okuningana okubalulekile phakathi kwe-Amazon Prime Day neBlack Friday okuthinta ikhwalithi yamadili nokuthi uyahamba yini uyakwazi ukufinyelela kubo ngaphambi kokuba bathengise.
I-Prime Day, kusobala, ikakhulukazi umcimbi wase-Amazon, okusho ukuthi iningi lokonga lizovela kumthengisi oyedwa nabanye abasebenzela ukuncintisana nabo. Lokhu m Lokhu kusho ukuthi okunikezwayo kungaphezulukulula ukuthola futhi uhlole amanani, ngenani elincane labathengisi abanikezela ngokuncintisana. Kungcono kakhulu uma ungenantshisekelo yokulinda enye i- $ 5 ku-Chromebook yakho.
Kodwa-ke, iBlack Friday ingumcimbi omkhulu kakhulu ophethwe abathengisi abaningi ngokuhlukahluka okuningi. Yize lokho kusho ukuthi kufanele usakaze inetha elibanzi, hlola izitolo eziningi, futhi unethemba lokuthi ukuthengiswa kwakho kwe-flash akushaywa ngomunye ngemizuzu nje, abathengisi bonke bayancintisana (kunokuba kube yi-Amazon kuphela), ngakho sijwayele ukubona amanani entengo ehla kancane.
Futhi kufanele uqaphele ukuthi uzodinga
I-Amazon Prime Day vs Black Friday: ama-TV
(Isikweletu sesithombe: LG)
iBlack Friday inamanani aphansi kumikhiqizo eminingi i Esigabeni sesabelomali kepha iPrime Day inikeza inani elingcono lemali kulesi sigaba.
OkuningiImikhiqizo emikhulu efana ne-Samsung ne-LG yenza kangcono kune-Black Friday, ikakhulukazi ukukhishwa konyaka omusha okusacishe kube kamuva kakhulu kwizaphulelo ze-Prime Day (yize kunabathengisi abaningi abanikeza amadili ancintisanayo lokhu kungashintsha. lokhu an).
I-Amazon Prime Day ingcono kakhulu kumamodeli wonyaka owedlule njengoba angaba semashalofini ngoNovemba.
Uma uthenga ngaphakathi kwebanga lesabelomali, uzothola amanani aphansi ku amathelevishini uma kuqhathaniswa neBlack Friday. Isigaxa esishibhe kakhulu sanyakenye besizokubiza u- $ 88 ngoNovemba (isibonisi esingu-32in 720p Scepter), ngentengo ephansi kakhulu ye-Prime Day ku- $ 149.99 ku-32in Toshiba smart TV. Kuyathakazelisa nokho ukuthi izinketho zebhajethi yePrime Day empeleni zinikeze inani elingcono lemali, ngama-specs amaningi nezinhlelo zokusebenza ezisesikhathini.
Noma kunjalo, uma sesigqoke i-nUkunaka kwethu ekubonisweni kwe-4K, sibona amanani entengo asimeme kakhudlwana ku- Iziphesheli ze-Prime Day TV (amayunithi ashibhile, asesitoko isikhathi eside, futhi izaphulelo ezinkulu aziyona ingxenye yokuthengiswa kwe-flash okusheshayo). I-43-intshi Hisense 4K TV ibiza u- $ 219.99 nje uma kuqhathaniswa nePrime Day, ngesibonisi esishibhile esingu-4K esidinga isikhathi sakho ku-Black Friday ngo- $ 267.99 (43-inch Samsung 7-series).
Kukhona i-caveat encane lapha, noma kunjalo. Kungenzeka ukuthi uthole izaphulelo kumikhiqizo emikhulu ku- Iziphesheli ze-Black Friday TV , njengoba i-Amazon ivame ukunamathela kokukodwa kwayo kwe-Prime Day okuningi kakhulu. Sibona abantu abanjengo-LG ne-Samsung bezibandakanya emcimbini wasehlobo, kepha hhayi ngamanani angacekela phansi izibonisi ezisezingeni eliphansi ezinikwe amandla i-Amazon. phakathi kwale micimbi emibili, ikakhulukazi ngoMeyiManje njengoba abathengisi abaningi ngokwengeziwe beqa isikhathi se-Prime Day ye-Amazon.
Izikhathi zisho ukuthi ukukhishwa kwakamuva konyaka kungaba kubanda kakhulu kwizaphulelo zePrime Day, ngaphambi kokwehlisa intengo kancane ngeBlack Friday. Kodwa-ke, uma ungenandaba nokuthi iprosesa elincane noma ukuthuthukiswa komsindo, iPrime Day ingcono kumamodeli wonyaka odlule njengoba ikakhulu esemashalofini ngoNovemba.
I-Amazon Prime Day vs Black Friday: Amalaptop
(Isikweletu sesithombe: Dell)
IBlack Friday ngokomlando ingcono ngamadili we-laptop ngamanani aphansi nobubanzi obubanzi ...
... kepha amanani aphansi kakhulu abekelwa ukuncintisana kakhulu nge-flash sales unamathuba amancane okuthola amadili amahle kakhulu.
Ama-Amazon alwa kulesi sigaba, kodwaabanye abathengisi bangaba sesimweni esingcono sokunikeza izaphulelo ezinkulu ngo-2021. Usuku, olunikela ngamadili amaningi we-laptop. Ngaphandle kwalowo mncintiswano owengeziwe ehlobo, noma kunjalo, sivame ukubona amadili we-laptop angcono uma kuqhathaniswa neBlack Friday.
Amadili weLaptop Black Friday
adume kabi futhi uzothola uhla olukhulu lwemiklomelo yokubanjwa ku-
Konke okushiwoyo, amadili asuka lapho ngonyaka odlule kungenzeka kungabi omele kakhulu. Ubhadane lwalunciphise kakhulu ukunikezwa kwama-laptops ashibhile, futhi abathengisi bebengazimisele kakhulu ukunciphisa lokho kuthengwa kwesabelomali njengoba isidingo sanda. Silindele ukunikezwa kimiAma-pricey ns ayatholakala kulo nyaka, futhi uma unikezwa ukuthi abanye abathengisi bazoba sesimweni esingcono sokwenza ngcono ukugembula kwabo ehlobo, ngaso sonke isikhathi kufanelekile ukubuka i- Prime Day Deals on Laptops .
Futhi, lezi zintengo eziphansi impela ngoLwesihlanu oMnyama zivame ukuba ngenxa yokuthengisa okufushane kakhulu kwe-flash. Sibona izaphulelo ezilinganiselwe zamasheya kuma-laptops kunanoma iyiphi enye idivayisi phakathi kwe-Black Friday, ngezinye izikhathi amadili amangalisayo athengisa kungakapheli nemizuzu. Lokhu kusho ukuthi ngenkathi amanani ehla kakhulu ngoNovemba, amathuba akho okuthenga isivumelwano esihle kakhulu emshinini owufunayo nawo anciphile kakhulu.
(Isikweletu sesithombe: Sony)
Izintengo zeBlack Friday zivame ukudlula i-Amazon Prime Day, kepha ukuncintisana okungeziwe kusho ukuthi awukwazikungenzeka ingakwazi ukuthola isivumelwano osifunayo.
Ama-headphone amaningi, noma kunjalo, avele abuyele kuzintengo zawo ze-Prime Day phakathi kwe-Black Friday, ikakhulukazi uma ngabe emidadlana futhi eshaye inani lawo. .
Ngokuvamile, sibona iBlack Friday inikela ngamanani aphansi kumahedfoni, i-AirPods Pro ishaya u- $ 189.99 ngoNovemba owedlule kusuka entengo engu-199.99 $ wePrime Day.
Kodwa-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi ama-headphone athanda ukubamba inani lawo isikhathi eside kakhulu kunama-laptops nama-TV. Lokhu kusho ukuthi umehluko wamanani phakathi kwalokhu kuthengiswa okubili kuncane kakhulu, njengoba bekulolo shintsho lwama- $ 10 kuma-AirPods Pros. Eqinisweni, sibona amanani emane abuyela ezikhundleni zabo zePremier Day kaningi njengoba sizibona ziwela phambili phakathi noBlack Friday. Lokhu kuvame ukwenzeka kumamodeli amadala afana neBoseUkuthulaComfort II. Lawa mahedfoni angawela entengo ethile, lapho abathengisi abakwazi ukuwathengisa ngemali encane kuze kuvele uhlobo olusha.
Okunqoba lo mdlalo we
Prime day headset deals Day
, nokho, ukuthi ukuncintisana okungeziwe ngoNovemba. Imibala ethandwa kakhulu ijwayele ukuthengisa ngokushesha okukhulu, futhi imvamisa hhayi ngamanani aphansi ezinye izinhlobo. Thatha i-Beats Solo Pro, isibonelo. Ngonyaka odlule sibone kuphela amanani entengo kaPrime Day ehla aya ku- $ 199 kwaBest Buy, kodwa ngoNovemba wawungathatha amapheya ngama- $ 169 - kepha hhayi abamnyama noma abamhlophe. Lezi zindlela zombala zithengise ngokushesha okukhulu kunoLwesihlanu Omnyama ngezindleko zazo zakuqala zama- $ 199 ngosuku lokuqala, nemibala esele, njengemodeli eluhlaza okwesibhakabhaka, yehlisa amanani abo nge- $ 30 eyengeziwe. Ekuboneni kuqala, iBlack Friday inikela ngamanani angcono ama-headphone, kepha mancane amathuba okuthi wenze njaloOkutholakalayo ukuthola okuhle kakhulu kuwe ngoba isixuku siminyene kakhulu. Lokhu kusho ukuthi kufanele ulinde kuze kube uLwesihlanu Omnyama uma ufuna amanani aphansi kakhulu futhi uzimisele ukuwusebenzela, ngaphandle kwalokho iPrime Day kungenzeka inikeze isikhathi esilula nezaphulelo ezifanayo.
I-Amazon Prime Day vs Black Friday: ama-smartwatches
(Isikweletu sezithombe: i-Fitbit)
Ngonyaka odlule kuze kube ngu-Okthoba, ambalwa kakhulu ama-smartwatch amadili ngokuqhathaniswa nePrime Day
i-Apple Watch Series 6 kufanele igcinwe kangcono izaphulelo eziningi uma kuqhathaniswa ne-Prime Day
Imikhiqizo yesabelomali ephansi engaphansi kuka- $ 100 / £ 100 ingaba amanani afanayo kuyo yomibili imicimbi
I-Amazon Prime Day yangonyaka odlule yahlehliselwa u-Okthoba, ekugcineni okube nomthelela omubi kwizivumelwano zewashi le-smart quality ezenzelwe ukubanjwa. Kungenxa yokuthi uSAbakwaSamsung no-Apple bobabili baqalise isizukulwane sabo esilandelayo sabaqaphi bokuqina emavikini ngaphambi kosuku olubambezelekile. Endabeni ka-Apple, lokho bekusho izaphulelo ezimbalwa kakhulu ku-SE noma ku-Series 6, kanye nokushoda kwesitoko ku-Series 5. Kodwa-ke, ngo-Black Friday lezi zinhlobo bezithole isikhathi sokuvuthwa, uma nje inyanga noma kunjalo, futhi ekugcineni sabona isaphulelo esingu- $ 40 ku-Series 6 esashaya
Iziphesheli ze-Prime Day Apple Watch
. Yize lokhu kuphazamisa ukuqonda kwethu kokuthi sizothenga ini kulo nyaka, labo abaphuthelwe amadili we-smartwatch ngo-2020 kungenzeka bavuzwe ngamadili asetafuleni ngo-2021.
I-Amazon Prime Day ibuyele ezinsukwini zayo zasehlobo manje , futhi lokho kusho ukuthi isizukulwane sanyakenye sizobe sesimweni esihle sezinye izaphulelo. Uma inkambiso yaminyaka yonke izwakala iyiqiniso, i-Apple izokwethula i-Series 7 yayo ngoSepthemba. Uma ufuna uchungechunge lwe-6, khona-ke isitoko sizoba njaloi-nt ithengiswe ngesikhathi kuzungeza iBlack Friday, okusho ukuthi iPrime Day izobe ifuna ukwenza ezibukwayo ukuze ihehe amakhasimende kusitoko sayo samanje se-gen. usekhona.
Noma kunjalo, i-Series 7 izobe inezinyanga ezimbalwa emashalofini aholela ku-Black Friday futhi kungenzeka ithole isephulelo esifanayo kumadili we-Series 6. wangonyaka odlule.
Imikhiqizo eminingi ye-smartwatch iyalandela lolu hlelo lokukhishwa, kepha mhlawumbe hhayi njengonyaka njenge-Apple, kepha imikhiqizo efana noGarmin, uFitbit, kanye ne-Samsung abavami ukudonsa izizukulwane zabo ezindala emashalofini ngokushesha okukhulu. Lokhu kusho ukuthi ungathola amanani aphansi kakhulu kunoma iyiphi imodeli efakwe esikhundleni ezinyangeni eziholela ku-Black Friday, futhi sibona amadivayisi weFitbit neGarmin ikakhulukazi ahlinzeka ngamanani aphansi ngoNovemba.
Ekupheleni kwesabelomali, noma kunjalo, ungathenga entsha.ewatchwatch ngoJuni. Lapho amanani eqala ukufika ku- $ 120 / £ 120 umkhawulo wesaphulelo usuphansi kakhulu futhi ngeke ulondoloze okuningi ngoNovemba.
(Isikweletu sesithombe: Apple)
iPads kanye namathebulethi e-Samsung Galaxy athengisa ngokushesha phakathi nayo yomibili le micimbi, kodwa ube nenhlanhla engcono ku-Prime Day. I-gen iPad ne-Samsung Galaxy Tab S7 kungenzeka ingahlali isikhathi eside kunenguqulo entsha kumathebulethi, okusho ukuthi amanani azoba ngcono uma kuqhathaniswa ne-Prime Day.
IBlack Friday inebanga elibanzi labathengisi, okusho ukuthi ungathola amadivayisi amadala asathengiswa, okungenzeka anikezwe ezinye izesekeli.
Izaphulelo ku-iPad Pro 2021 entsha zingangconywana kunalezo ezikuLwesihlanu Olumnyama, kepha asaziAsilindele ukwehla okukhulu kwentengo.
Amathebulethi amahle kakhulu afana ne-iPad kanye nohlu lwe-Samsung Galaxy Tab athengisa masinyane kuwo womabili ama-Amazon Prime Day nango-Black Friday, yize kungenzeka kakhulu yenza kanjalo ukuthengiswa kwehlobo. Ukuncintisana okuncane nokuthengiswa okumbalwa kwe-flash okuzobhekana nakho kusho ukuthi uzokwazi ukushaya izixuku kube lula ngoJuni. Ngokwengeziwe, sithole ukuthi amanani entengo yamathikithi amakhulu afana ne-iPad Pro ahlala efanayo kuzo zombili izinhloso
Iziphesheli Zosuku Lokuqala ku-iPad
ne-iPad Black Deals Friday
($ 749 for the 11-inch, or $ 799, and $ 949 for the 12.9-inch, or $ 999) - yize kufanele kwaziwe ukuthi lokhu kwaba lapho iPrime Day yenzeka ngo-Okthoba ngakho-ke isondele kakhulu Usuku lwangoNovemba lwangoLwesihlanu Olumnyama.
IBlack Friday inabathengisi abaningi abaphakathi komdlalo, abanye babo abangaba nezitoko zamamodeli amadala anamanani aphansi kakhulu futhi, abakwazi ukuba bezitolo izaphulelo kumamodeli amasha, nikela izesekeli ezihlanganisiwe ngokungaphansi kokuhle.
Lokhu kwenzeka ngeLwesihlanu olumnyama ngonyaka owedlule, nge-B & H Photo ihlinzeka nge-2018 Pro engu-12.9-intshi 256GB yeselula ye-iPad Pro ngekhibhodi yomlingo engu- $ 1,249, uma kuqhathaniswa ne- $ 1,648. Ukube awukhathazekile ngokuthuthuka kwakamuva, lokhu bekungumnikelo okhangayo obungekho ngesikhathi se-Prime Day.
Uma kukhulunywa ngeminikelo yakwa-Samsung, izinsuku zango-Okthoba zanyakenye bezisho ukuthi i-S7 ne-S7 Plus bezingakalungeli neze izaphulelo futhi benze kangcono kakhulu uma kuqhathaniswa neBlack Friday ngokufanele. Ngo-2021, noma kunjalo, lawa mathebhulethi azobekwa kahle kwezinye izaphulelo zePrime Day ngaphambi kwanoma yimaphi amamodeli amasha ngoSepthemba / Okthoba - ukukhishwa okusha okungeke kukhule ngokwanele ukunikela ngezinga elifanayo lokonga njengeBlack Friday. Uma ufuna i-iPad yesizukulwane sesi-8 noma i-Samsung Galaxy Tab S7, sincoma ukuthi weqe kumadili we-Prime Day ale nyanga. Ithemba le-IPad Pro lingalindela intengo engcono uma iqhathaniswa noBlack Friday, noma inqwaba kumodeli endala, kepha asithandi ukubona izaphulelo ezinkulu kulawa madivayisi kuze kukhishwe.isizukulwane esisha, ngakho-ke ukonga okwengeziwe ngoNovemba kungahle kube kuncane.
I-lin-manuel miranda: indoda eyenza i-hamilton yaba yinto yasesiteji
2021-06-20 12:06:26 | Okusha
Njengoba uhlelo oludumile lweHamilton luvulwa eWest End yaseLondon, sibheka ubuhlakani bokudala obuyimpumelelo. ...
UMary Poppins Uyabuya: Indaba Emuva Kwengoma Yomculo
2021-06-20 12:02:18 | Okusha
Umqambi nomqambi wamafilimu wokuthi bamaka kanjani lo mdlalo olandelayo. ...
I-playwright ivuselela iqembu lebhola lezinyawo lama-1920
2021-06-20 11:58:30 | Okusha
Iklabhu ye-ephemeral evela enkathini emfushane yegolide yebhola labesifazane ibuyela empilweni esiteji. ...
I-love Island: i-itv imemezela izindlela ezintsha zenhlalakahle yabazongenela ukhetho
2021-06-20 11:55:12 | Okusha
Abahlanganyeli ochungechungeni lwesikhombisa lombukiso bazophinde bathole ukwesekwa "okugcwele" ngokwengqondo. ...